China Airline Review travel vlog |By myanmar youtuber ZLN - Fumceunice
#Chinaairlines #flightreview #myanmaryoutuber #zawlinnaing
videoမတင်တာတော်တော်ကြာသွားပြီ။ ခရီးတွေသွား အလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့မတင်နိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါသူငယ်ချင်းတို့ ။ နောက်ပိုင်းမှာသူငယ်ချင်းတို့သိချင်နေတဲ့အရာတွေကိုစုပြီးတင်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ လတ်တလောရှိတဲ့videoလေး တစ်ခုတင်ထားပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
videoမတငျတာတျောတျောကွာသှားပွီ။ ခရီးတှသှေား အလုပျတှရှေုပျနတောနဲ့မတငျနိုငျတာခှငျ့လှတျပါသူငယျခငျြးတို့ ။ နောကျပိုငျးမှာသူငယျခငျြးတို့သိခငျြနတေဲ့အရာတှကေိုစုပွီးတငျပေးဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။ အားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ။လောလောဆယျတော့ လတျတလောရှိတဲ့videoလေး တဈခုတငျထားပါတယျ။
Posted in Du Lịch✅Tagged review myanmar
Diễn viên Vũ Ngọc Anh chia sẻ về viên uống nở ngực Ngọc Nhũ Nương
2 thoughts on “China Airline Review travel vlog |By myanmar youtuber ZLN”
When I was living in Thailand, I used to fly China Airlinesalot. They also provided complimentary beer and wine….how about now? You didn't mention where you were coming from, flight to Yangon from which city?
Gđÿū œď2æ says: